युगसम्बाद साप्ताहिक - ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
Monday, 01.26.2015, 04:00pm (GMT+5.5)
जनताको अभिमत अनुसार लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेर सोही अनुसारको क्रियाकलाप नेताहरूले गरेका भए मुलुकले यतिबेला नयाँ संविधान पाइसक्थ्यो । तर, नेपालमा ढुंगा निचोरेर तेल निकाल्ने निरर्थक प्रयासमै एक वर्ष बित्यो । एक वर्षको समय मात्र बितेन नेताहरूको विश्वसनीयता, नैतिकता र इमानदारीता समेत गुम्यो । आआफ्नो बचाउका लागि नेताहरूले जजसलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रयास गरे पनि जनताले सूक्ष्म दृष्टिले हेरिरहेका हुँदा को गलत र का सही भन्ने आउँदा दिनमा प्रमाणित हुनेछ । किनभने जेजस्ता अडानका कारण संविधान बनेन त्यो मुलुकको हितमा पटक्कै थिएन । एकपक्षलाई सही लगेको कुरा अर्को पक्षलाई बेठिक लाग्नु स्वाभाविक हो तर संविधान जस्तो मुलुकको सुदूर भविष्यसम्म प्रभाव पार्ने र समय अनुसार आवश्यकता बमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने दस्तावेजमा अहिले नै सबै कुरा यसरी र उसरी राख्नुपर्छ र राख्नु हुँदैन भन्ने जुन अडान देखापरे त्यसले राजनीतिक नेताहरूको चिन्तन धार अत्यन्त साँघुरो रहेको समेत प्रमाणित भएको छ ।
अहिले संविधान जारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सहमति हुन नसकेर हो । यदि सहमतिबाट मात्रै संविधान जारी गरिनु थियो भने निर्वाचन किन गरेको । संविधानसभाले कुनै निर्णय गर्न नपाउने हो भने सभासदहरूलाई तलबभत्ता दिएर किन पालिराखेको ? के उनीहरूको काम चार दलका चार नेताले गरेको सहमतिमा थपडी बजाउने मात्र हो । त्यसैका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ तलब भत्ता खुवाएर पालिएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर नेताहरूले नै दिनुपर्छ । अर्कोतिर सहमतिको रटान लगाएर विमतिको खेती गर्न र सहमति हुन नसके प्रक्रियामा पनि जान नसक्ने दुई तिहाईको दम्भ देखाउने पक्षले पनि आफूले पाएको मतको सम्मान गर्न सकेनन् । विपक्षमा रहेकाहरूले बिरोध गर्नु, आफ्ना कुरा थोपर्न खोज्नु स्वाभाविक हो तर सत्तापक्ष र निर्णायक हैसियतमा रहेकाहरूले पनि केही गर्न सकेनन् । न उनीहरू वार्तामा सफल भए न प्रक्रियामा नै जाने हिम्मत गरे । संसारमा कहीं पनि शतप्रतिशत सहमति हुँदैन । यो जगजाहेर विषय हो तर सहमति हुँदैन भनेर सहमतिको प्रयास नगर्ने भन्ने पनि हैन । तर हुँदै नहुने सहमतिको पछि लागेर जसरीसमय बिताइयो, यो इतिहासले माफ दिने सन्दर्भ हैन ।
किनभने चार राजनीतिक शक्तिले सहमति गरेर संविधान जारी गरेकै भए पनि कुनै न कुनै शक्ति यसको बिरोधमा निस्कन्थ्यो नै । असन्तुष्टले बिरोध गर्नु स्वाभाविक हो र लोकतन्त्रमा यस्तो चलिरहन्छ । अनि संविधान शिलालेख पनि हैन, जसमा संशोधन गर्न नसकियोस् । आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यो जगजाहेर विषय हो । राजनीतिक मूल्य र मान्यताका स्थापित परम्परा र जनताको चाहना अनुसार संविधानको आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । तर अहिले नै सबै कुरा स्थापित गर्ने र नगर्ने होडवाजले मुलुकले अर्कोपटक निर्धारित समयमा संविधान पाएन ।
यसअघिका आशंकाहरू नै नेताहरूले चरितार्थ गरिदिए । माघ ८ गते रातिसम्म चलेको सहमतिको प्रयास र त्यहाँ उत्पन्न विवाद र कायम अडान संविधान दिनका लागि हो कि नदिनका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सजिलै मिलेको छ । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ । नेताहरूले जसरी सहमतिको लोहोरो पकाउन खोजे त्यो सम्भव थिएन र त्यसले केवल समय र ऊर्जाको मात्र क्षति गर्याे । जनताको घोर अपमान भयो । के जनताको अभिमतको कुनै मतलब छैन । दलका केही नेताहरूको स्वार्थपूर्ति नै आम जनताको स्वार्थ र राष्ट्रिय हितको एजेण्डा बन्न सक्छ ? सत्तापक्षले भनेको सबै कुरा ठीक र विपक्षले भनेका सबै कुरा गलत पक्कै हैनन् र दोषमुक्त पनि कोही छैनन् । निश्चित समयभित्र एउटा प्रक्रिया र त्यसपछि अर्को प्रक्रियामा जाने पूर्वघोषित प्रतिबद्धता र लिखत अनुसार अघि बढ्न केले रोक्यो ? संविधान जारी हुन नसकेपछि क्षमायाचना गर्ने आवश्यकता समेत देखिएन । कम्तिमा माघ ८ गते राति प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभाको रोष्टमबाटै क्षमायाचना गरेका भए पनि उनीहरूको बचेखुचेको इज्जत धानिन्थ्यो तर चार शक्तिबीच यसमा समेत सहमति भएन ।
यो सब राष्ट्रिय चिन्तनधारको कमीले गर्दा हो । व्यक्तिको स्वार्थ नै सर्वोपरि मानिएको अहिलेको स्थितिमा न राष्ट्रिय स्वाधीनताको चिन्ता छ न लोकतन्त्रको नै । एकातिर क्रान्तिको संवाहक शक्ति भन्नेको धङधङी, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूको उन्मादनकाबीच लोकतन्त्रको मात्र हैन मुलुककै भविष्य अन्धकारतिर धकेलिइरहेको अहिलेको स्थितिमा मुलुक बताउने कस्ले हो ? आम चिन्ताको उत्तर कसैसंग छैन ।
यसको अर्थ के हो भने नेताहरूले जनतालाई कुनै भाउ दिएका छैनन् । किनभने पटकपटकको प्रतिबद्धता, सहमतिको प्रयास र निरन्तरको छलफल तथा जनदवावले पनि प्रमुख भनिएका नेताहरूको चेत खुलेन । मुलुकले संविधान पाएन । अब कहिले पाउने हो ? संविधानका विवादित विषयमा ६ महिनाभित्र सहमति गर्ने भन्दै १२ महिनाको समय व्यतित गर्दा अन्तिमतिर दलहरूबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना भयो । संविधानसभामा तोडफोड भयो, नेताहरूमाथि आक्रमण भयो । नेताहरू अन्तिम समयमा आएर राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउने कसरतमा लागे । यो अभ्यासले मुलुकको भावी दिशा र दशा कस्तो हुने हो पत्तो छैन ।